အလန်ရှီးယားရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် သွင်းဂိုးအများဆုံးစံချိန်ကို အဂွဲရိုးချိုးဖျက်နိုင်မလား
1 Oct 2018 . 5:11 PM
မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှုး အဂွဲရိုး Aguero ဟာ အလန်ရှီးယား Alan Shearer ရဲ့ပရီးမီးယားလိဂ် သွင်းဂိုးအများဆုံးစံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ပါလိမ့်မယ် လို့ အသင်းဖော်ကွင်းလယ်လူ ဘာနာဒိုဆေးဗားလ် Bernardo Silva ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အလန်ရှီးယားဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ သွင်းဂိုး(၂၆၀)နဲ့ ဂိုးသွင်းအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ရပ်တည်နေသူဖြစ်ပြီး အဂွဲရိုးကတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ ပရီးမီးယားလိဂ်သွင်းဂိုး(၁၄၈)ဂိုးသွင်းယူထားပါတယ်။
ဘာနာဒိုဆေးဗားလ် က ” သူ အလန်ရှီးယားရဲ့စံချိန်ကိုချိုးဖျက်နိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူ့မှာဒါကိုလုပ်နိုင်မယ့် စွမ်းရည်ကောင်းတွေ ရှိပါတယ်။ ရာသီတိုင်းမှာ သူကသွင်းဂိုးတွေများစွာ သွင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အဂွဲရိုးအနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပြီးအသင်းအတွက် ဆုဖလားတွေရရှိအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူက မန်စီးတီးအသင်းသမိုင်းမှာ ဂိုးသွင်းအကောင်းဆုံးကစားသမားပါ။ အဂွဲရိုးက မန်စီးတီးအသင်းအတွက်သာမကပဲ ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်လည်း ဂန္ထ၀င်ကစားသမားတစ်ဦးပါလို့ ” ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Photo: Chicago Tribune , The Independent
အလနျရှီးယားရဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးစံခြိနျကို အဂှဲရိုးခြိုးဖကျြနိုငျမလား
မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ တိုကျစဈမှုး အဂှဲရိုး Aguero ဟာ အလနျရှီးယား Alan Shearer ရဲ့ပရီးမီးယားလိဂျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးစံခြိနျကို ခြိုးဖကျြနိုငျပါလိမျ့မယျ လို့ အသငျးဖျောကှငျးလယျလူ ဘာနာဒိုဆေးဗားလျ Bernardo Silva ကပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ အလနျရှီးယားဟာ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ သှငျးဂိုး(၂၆၀)နဲ့ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ ရပျတညျနသေူဖွဈပွီး အဂှဲရိုးကတော့ လကျရှိအခြိနျထိ ပရီးမီးယားလိဂျသှငျးဂိုး(၁၄၈)ဂိုးသှငျးယူထားပါတယျ။
ဘာနာဒိုဆေးဗားလျ က ” သူ အလနျရှီးယားရဲ့စံခြိနျကိုခြိုးဖကျြနိုငျမယျလို့ ကြှနျတျောထငျပါတယျ။ သူ့မှာဒါကိုလုပျနိုငျမယျ့ စှမျးရညျကောငျးတှေ ရှိပါတယျ။ ရာသီတိုငျးမှာ သူကသှငျးဂိုးတှမြေားစှာ သှငျးယူနိုငျပါတယျ။ အဂှဲရိုးအနနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ကို ကူညီပွီးအသငျးအတှကျ ဆုဖလားတှရေရှိအောငျ စှမျးဆောငျပေးနိုငျမယျလို့ ကြှနျတျောတို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ သူက မနျစီးတီးအသငျးသမိုငျးမှာ ဂိုးသှငျးအကောငျးဆုံးကစားသမားပါ။ အဂှဲရိုးက မနျစီးတီးအသငျးအတှကျသာမကပဲ ပရီးမီးယားလိဂျအတှကျလညျး ဂန်ထဝငျကစားသမားတဈဦးပါလို့ ” ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
by Naing Linn . 1 min ago
by Ko Kyue . 31 mins ago